Mudanayasha china jeebka dheer ee mugga balaaran karti balaaran laba jibaaran xajmiga xajmiga dumarka xajmiga xajmiga xajmiga leh ee dharka labbiska xaashida dharka Warshadaha iyo Alaab-qeybiye | Sansan
Shayga No. ywssd-039
Qaabka Yurub iyo Ameerika
Waxyaabaha caanka ah embossing
Adag dhexdhexaad ilaa jilicsan
Tayada xargaha polyester
Midab guduud, buluug, madow, casaan, bulug, casaan, casaan
Miisaanka badeecada 0.2kg
Cabbirka badeecada 19.5 * 9.5 * 4cm
Waxay cabbirtaa 7.6 inji x 3.7 inji x 1.5 inji (qiyaastii 19.5 cm x 9.5 cm x 4 cm) oo culeyskeedu yahay 200 garaam.
Waxaa loogu talagalay in lagu haysto 8 kaararka bangiga ah, waxaa jira 4 meelood oo lagu keydiyo lacago fara badan oo waraaqo waaweyn ah, 1 jiinyeer lagu kaydiyo lacagaha muhiimka ah, laba qaybood oo qarsoon iyo labajibbaarasho ballaaran oo zodhka furashada iyo xiritaanka. Qolka ballaadhan wuxuu hayaa kaararkaaga deynta, biilasha, biilasha, taleefannada gacanta iyo waxyaabaha kale ee yaryar. Kaydintu hadda waa fowdo. Suunka gacanta laga saari karo, isticmaalka badan, waa la iswaafajin karaa doonis, badbaado iyo wax ku ool ah. Zipper tayo sare leh oo bir leh qafiifiyaal bir qaro weyn leh, dhalaalaya oo nadiif ah, qumman oo aan dhejis lahayn, waarta.
Naqshadani nooca 'lychee' leh ee laba-zip-bag jeebka ah waa shayga ugu fiican ganacsiga iyo waqtiga firaaqada, iyo sidoo kale doorashada ugu fiican qoyska iyo saaxiibbada.
Hore: Mudanayaal jeebka jeebka ugu weyn nooca 2020 taleefanka boorsada mobilada cusub ee Kuuriyada Woqooyi
Xiga: Mudanayaal cusub ayaa jeebka jeebka ugu dhejisan boorsada jeebka dheer
Garab-gaaban garabka-gaaban-awood ballaaran l ...
Kabaha cusub ee Wallet-ka ee ragga oo Casri ah ...
Pvc dharka lagu qurxiyo oo lagu qurxiyo boorso biyo aan ...
Dharka cusub ee jeebka-khafiifka ah boorsada-khafiifka ah positi ...